YBS fell from overpass – Myanmar Photo News
April 5, 2020 April 5, 2020 myanmarphnews General
YBS bus fell from over pass near 8 wards Ma Yan Gone Township, Yangon on April54:40 PM. Myanmar Fire Department went there in time and rescued with one Towing Vehicle, one Lifting Vehicle , one ambulance, and several fire department cars. There are 8 males and 14 female passengers injured in accidents and rescuers took them to North Okkalapa hospital.
၅.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၁၆ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လမ်းဝဂုံးကျော်တံတားပေါ်မှ ယာဉ်(၁)စီး ထိုးကျတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲမင်းသူ ဦးဆောင်၍ မီးသတ်ယာဉ်(၃)စီး၊ သူနာတင်ယာဉ်(၂)စီး၊ Towing Vehicle (၁)စီး၊ Lifting Vehicle (၁)စီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၁)စီး၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ်(၁)စီး၊ သူနာတင်ယာဉ်(၁)စီး၊ တာမွေမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၁)စီး၊ သူနာတင်ယာဉ်(၁)စီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၁)စီး၊ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ကျား(၈)ဦး၊ မ(၁၄)ဦးတို့အား မြောက်ဉက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။